နယူးကာဆယ် ပရိသတ်ရဲ့ အခြေအနေ ၊ အဂွေရို ရဲ့ ဘာဆာ ပွဲဦးထွက် ၊ နိုင်ပွဲဆက်တဲ့ နာပိုလီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
နယူးကာဆယ် ပရိသတ်ရဲ့ အခြေအနေ ၊ အဂွေရို ရဲ့ ဘာဆာ ပွဲဦးထွက် ၊ နိုင်ပွဲဆက်တဲ့ နာပိုလီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ နယူးကာဆယ် – စပါး ပွဲစဉ် အတွင်း ပွဲကြည့်စင်ပေါ်မှာ ရုတ်တရက် လဲကျ ခဲ့တဲ့ ပရိသတ် ဟာ သတိပြန်လည် လာခဲ့ပြီး ဆေးရုံမှာ ကုသမှု ခံယူနေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
စပါး က ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့တဲ့ အဆိုပါပွဲရဲ့ ပထမပိုင်း ပြီးဆုံးခါနီးမှာ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွား ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး စပါး နောက်ခံလူ ရီဂွီလွန် က ဦးစွာ သတိပြုမိကာ ကွင်းလယ်ဒိုင် မာရီနာ ကို အချက်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါပွဲ ကို နယူးကာဆယ် ပိုင်ရှင်သစ် ၊ CEO သစ်တို့ လာရောက် အားပေး ခဲ့ကြပြီး ပရိသတ်တွေ ကလည်း ကွင်းပြည့် လာရောက်ကာ ပိုင်ရှင်သစ် တွေကို ကြိုဆိုကြောင်း ပြသ သွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီမှာ ဖီအိုရင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး ဒူဆန် ဗလာဟိုဗစ် ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေတယ် လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှူးကြီး ကာရင် ဘန်ဇီးမား က သူဟာ ရွှေဘောလုံး အတွက် စတင် အိပ်မက် မက်နေပါပြီ လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဗလင်စီယာ အသင်းကို ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ အတွက် အန်ဆုဖာတီ ၊ မမ်းဖစ် ဒီပိုင်း နဲ့ ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို တို့က ၁ ဂိုးစီ သွင်းယူ ပေးသွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဒီပွဲ မှာ ဒဏ်ရာ ကနေ သက်သာလာတဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး အဂွေရို ဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်း အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် စတင် ပါဝင် ပေးခဲ့ပြီး လူစားလဲ ဝင်ရောက် ကစားသွားခဲ့တယ် လို့သိရ ပါတယ် ။
သတင်းအချို့ အရ လီဗာပူး နဲ့ တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလာ တို့ရဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စ ဟာ အဆင်ပြေဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် ရဲ့ အားထားရတဲ့ ကစားသမား အီဘရီ အီးဇီး ဟာ ဖနောင့်ဒဏ်ရာ ကနေ လျှင်လျှင် မြန်မြန် သက်သာလာပြီး လာမယ့် အပတ် မှာ စတင် လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ် နိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သတင်းကောင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ မှာတော့ နာပိုလီ ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိပြီး စီးရီးအေ မှာ ၁၀၀% နိုင်ပွဲ ရလဒ် နဲ့ ဦးဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် နဲ့ ရိုးမားတို့ ရဲ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ ယူဗင်တပ် ဟာ တိုက်စစ်မှူး မွိုက်စ်ကင်း ရဲ့ တလုံးတည်းသောဂိုး နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ လီဗာပူး ရဲ့ အားကစား ဒါရိုက်တာ မိုက်ကယ် အက်ဒွပ် ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ လီဗာပူး ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ မာစတာ တဦးဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ် အက်ဒွပ် ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်ကုန်မယ့် နွေရာသီ မှာ သက်တမ်းမတိုးတော့ဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ထားသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
တနင်္ဂနွေ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ နယ်သာလန် ပြည်တွင်းလိဂ် ပွဲစဉ် မှာ ဗွီတက်ဆီ အသင်းဟာ NEC အသင်း ကို ၁ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အောင်ပွဲခံကြမ်းမှုကြောင့် ပွဲကြည့်စင် ပြိုကျတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်း ထောက်မစွာ နဲ့ ဘယ်သူမှ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဒဏ်ရာ မရရှိ ခဲ့ဘူးလို့လည်း သိခဲ့ရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဘဝရဲ့ လူတိုင်း ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းဝင် အောင်ပွဲခံမှုအကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းရှင်းပြလိုက်တဲ့ မော်ရင်ဟို
Next Article လူပြန်စုံလာမှုနဲ့အတူ ဗလင်စီယာကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲက ဘာစီလိုနာသားတို့ရဲ့ စကားသံများ